ngu admin nge-20-06-29
Wamkelekile ukutyelela iwebhusayithi yethu; Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi kumzi-mveliso wethu kunye neqela, cofa apha: https://youtu.be/FTLvzO05vRg 1. JIAKE inkampani yemishini ye-wire mesh, sikwimveliso yobungcali yohlobo oluhlukileyo loomatshini bokuchwechwa kangangesithuba seminyaka engama-25. ; umatshini wethu ophambili kubandakanya
Kule veki iphelileyo, silayishe imishini yocingo oluneengcingo ezi-3sets kabini kubathengi bethu baseThailand; Umatshini wokudibanisa ucingo ocingciweyo ngowona matshini waziwayo waziwa kakhulu kwimakethi yaseThailand; Isetyenziselwa ukwenza uthango lwekhonkco, i-diamond mesh, ucingo lwegadi…
Kwi-Canton Fair Webcast ekwi-Intanethi
Ngenxa ye-COVID-19, i-canton fair ye-127 iya kusasazwa bukhoma kwi-intanethi; Ukusukela nge-15th ~ 24 kaJuni, 2020 Siya kuba nobuncinci be-10webcasts; izihloko kubandakanya ukuveliswa koomatshini, ukwazisa ngomzi-mveliso, ukukhuthaza umatshini wesitokhwe, ukuhlalutya imeko yentengiso kunye noqikelelo… njl. ukugubungela iintlobo ezahlukeneyo ...